नेपाली ‘ज्वाई’ गोबिन्दासँग कती छ सम्पती ? सुन्दै परिन्छ चकित ! – live 60media
९० को दशकमा दर्शको मन मष्तिक्समा बस्न सफल अभिनेता गोबिन्दाको ब्यक्तिगत जिवन पनि निकै रोचक छ । उनी सामाजिक रुपमा मात्र धनि छैनन्, आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै सम्पन्नशाली छन् ।
← सुस्मितालाई ससुराले बाथरुममा बलात्कार प्रयास, परिवार नै मिलेर हत्या
यी ५ अंगमा कोठी हुनेहरु हुन्छन् अत्याधिक का’मुक ! →